त्रिकोणात्मक सिरिज : ढुक्क हुनुस् ! यसकारण आज नेपालले अमेरिकालाई हराउँने छ ( शक्दो शेयर गरौ ) - News20 Media
February 8, 2020 February 8, 2020 N20LeaveaComment on त्रिकोणात्मक सिरिज : ढुक्क हुनुस् ! यसकारण आज नेपालले अमेरिकालाई हराउँने छ ( शक्दो शेयर गरौ )
काठमाडाैं- आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–टु अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालले आज अमेरिकासँग खेल्दैछ। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा नेपाल र अमेरिकाबीचको खेल बिहान साढे ९ बजे सुरु हुनेछ। नेपाल र अमेरिका त्रिकोणात्मक सिरिजमा पहिलो जितको खोजीमा मैदान उत्रने छन्।
नेपाल र अमेरिका पहिलो खेलमा ओमानसँग पराजित भएका थिए। नेपाल ओमानसँग १८ रनले पराजित भएको थियो भने अमेरिकालाई ओमानले ६ विकेटले पराजित गरेको थियो।
घरेलु मैदानमा पनि नेपालको यो पहिलो सिरिज हो । उता, अमेरिका पहिलो खेलमा ओमानसँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो । नेपालजस्तै अमेरिका पनि यो सिरिजमा जितको खोजीमा छ । यद्यपि, अंकतालिकामा समान १२ अंक रहे पनि अमेरिका ओमानभन्दा रनरेटमा अगाडि छ । अमेरिका अंकदूरी अझै बढाउन चाहन्छ ।
अमेरिकाविरुद्ध यसअघि लक्की हुँदै आएका सुवास खकुरेलको आगमनले नेपालको ओपनिङ जोडी फेरिने सम्भावना छ । ओमानविरुद्ध अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका शरद भेषवाकरले चोटका कारण सिरिजका बाँकी खेल गुमाएपछि उनको स्थानमा सुवासले मौका पाएका हुन् । सुवास अमेरिकाविरुद्ध शतक प्रहार गर्ने एक्लो नेपाली खेलाडी हुन् । उनले सन् २०१२ मा मलेसियामा भएको डिभिजन ४ मा अमेरिकाविरुद्ध ११५ रन प्रहार गरेका थिए । अमेरिकाविरुद्ध राम्रो केमेस्ट्री रहेको सुवासको आगमनले यसपटक पनि केही कमाल गर्ने सबैको आशा छ ।